Texting Translation - som / Minnesota Department of Human Services
Macluumaadka ku saabsan P-EBT ee fariimaha qoraalka ah
Wareejinta Dheefaha Elektaroonigga ee Aafada (P-EBT) waa dheefaha cunto oo ku-meelgaar ah oo ay heli karaan qoysaska reer Minnesota oo leh carruur heli lahaa cunto bilaash ah ama qiimo jaban haddii dugsiyadu furnaan lahaayeen.
Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota DHS waxay soo diri doontaa farriimo hal-dhinac ah iyada oo laga soo dirayo lambar bilaash ah ee 1-855-965-0703 si ay ugu wargeliso qoysaska inay heli doonaan dheefaha P-EBT. Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota ma weydiisan doonto macluumaad shaqsiyeed.
Fariimaha qoraalka ayaa bilaaban doona bisha Maarso 2021 waxaana laga yaabaa inay soo noqnoqdaan illaa iyo Sebteembar 2021. Ka qeybgalka helidda farriimaha qoraalka waa mutadawacnimo.
Fariin qoraal muunad ah:
Waaxda Adeegyada Dadweynaha ayaa kugu martiqaadeysa inaad hesho qoraallo leh ogeysiisyo muhiim ah oo ku saabsan dheefahaaga. Haddii aadan rabin inaad hesho farriimo, fadlan ku jawaab STOP (JOOJI).
Waad joojin kartaa qoraalada wakhti kasta. Kaliya qor "STOP" (JOOJI). Farriinta qoraalka waxaa laga soo diri doonaa 1-855-965-0703. Ka dib markaad noo soo dirto fariinta "STOP" (JOOJI), waxaan kuu soo diri doonaa farriin aan ku xaqiijineyno inaad ka baxday barnaamijka. Tan kadib, mar dambe nagama heli doontid farriimaha qoraalka ah. Haddii aad rabto inaad mar kale ku biirto, ku soo gudbi codsiga adoo maraya Foomka Caawinta P-EBT.
Haddii aad la kulanto arrimo ku saabsan barnaamijka farriinta waxaad ku jawaabi kartaa ereyga furaha ah ee HELP (CAAWIMAAD) si aad u hesho caawimaad dheeraad ah, ama waxaad toos uga heli kartaa caawimaad DHS.SNAP.SpecialProjects@state.mn.us ama 651-431-4608 ama 1-833-454-0153.
Kambaniyada adeegga taleefanka masuul kama aha farriimaha dib u dhaca ama in aan la helin
Sida caadiga ahaydba, lacag ayaa laga yaabaa in laga goosto lacagta taleefanka marka aan fariin kuu soo dirayno ama aad noo soo dirayso. Waxaad heli kartaa farriimo qoraal oo soo noqnoqda oo noqon kara ugu yaraan saddex jeer bishii. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid qorshaha qoraalkaaga ama qorshahaaga xogta, waxaa ugu wanaagsan inaad la xiriirto bixiyahaaga wireless-ka.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo kuu gaar ah, fadlan akhri siyaasadeena gaarka ah ee laga heli karo https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-3979-ENG
Barnaamijka P-EBT sida loogu baahdo wuxuu kuu soo diri doonaa fariimo qoraal ah oo ku saabsan faa'iidooyinkaaga P-EBT, ilaa aad go'aansato inaad ka baxdo helitaanka fariimaha qoraalka ah. Hoos waxaa ku qoran macluumaad la xiriira farriimaha qoraalka ah ee barnaamijka P-EBT uu damacsan yahay inuu kuu soo diro adiga iyo macluumaadka ku saabsan sida looga baxo helidda fariimaha qoraalka ah.
Farriimaha qoraalka ah ayaa loo diri doonaa qof kasta oo loo oggolaado dheefaha P-EBT ee siiyay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota lambar taleefan gacmeed shaqeynaya.
Barnaamijka P-EBT wuxuu kuu soo diri doonaa fariimaha qoraalka ah si uu kaagala soo xiriiro wixii ku saabsan dheefaha iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah ee ku saabsan dheefaha P-EBT.
Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona wixii fariin ah ama lacag ah ee lagaa qaado adeeg bixiyahaaga ee la xiriira farriinta qoraalka.
Waxaad heli kartaa farriimo qoraal ah oo soo noqnoqonaya kuwaas oo ka koobnaan kara ugu yaraan saddex jeer bishii.
Farriimaha qoraalka ah ee aad ka hesho barnaamijka P-EBT waxaa ku jiri kara macluumaad gaar ah. Adiga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta macluumaadka ku jira taleefankaaga.
Waad ka bixi kartaa oo joojin kartaa helitaanka fariimaha qoraalka ah ee barnaamijka P-EBT wakhti kasta adoo ku jawaabaya JOOJI fariin qoraal ah ama kala xiriiraya Xarunta Wicitaanka P-EBT 651-431-4608 ama 1-833-454-0153 . Haddii aad ka baxdo inaad ka hesho farriimaha qoraalka ah Barnaamijka P-EBT, ma ka heli doontid farriimo dheeri ah barnaamijka P-EBT illaa aad soo gudbiso codsi ah inaad mar kale ka qayb gasho adoo adeegsanaya Foomka Caawinta P-EBT.
Adigu waajib kuguma aha inaad ka hesho farriimaha qoraalka ah barnaamijka P-EBT, oo haddii aad go'aansato inaad ka baxdo helitaanka farriimaha qoraalka ah, tani wax saameyn ah kuma yeelanayso dheefahaaga ama adeegyadaaga.
Haddii aad ka laabatay inaad ka heshid fariimo qoraalka barnaamijka P-EBT, oo aadan laheyn i-meel loo gudbiyay Waaxda Waxbarashada Minnesota, barnaamijka P-EBT ayaa kugula soo xiriirayo boosto ahaan. Wixii wargelin ee barnaamijka P-EBT ah booqo bogga P-EBT ama bogga FAQ.
Barnaamijka P-EBT wuxuu ilaalin doonaa macluumaad kasta oo aan hayno. Magacaaga iyo lambarka taleefankaaga waxaa heli doona oo keliya shaqaalaha P-EBT iyo bixiyaha qoraalka ee P-EBT. Ogeysiis dhameystiran oo ku saabsan dhaqamadeena gaarka ah ayaa laga heli karaa https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-3979-ENG
Barnaamijka P-EBT wuu joojin karaa inuu kuu soo diro fariimaha qoraalka ah wakhti kasta. Barnaamijka P-EBT wuxuu kaloo u baahan karaa inuu ku soo waco ama kugula soo xiriiro qoraal ahaan, oo ay ku jirto emayl haddii cinwaanka e-maylka la siiyay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Shirkadda taleefanka gacanta mas'uul kama aha wixii fariin ah ee dib u dhaca ama aan la helin.
Sida loola xiriiro su'aalaha
Fadlan kala xiriir Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota taleefanka 651-431-4608, 1-833-454-0153 ama DHS.SNAP.SpecialProjects@state.mn.us